प्रचण्ड–ओली भेट : ओलीका प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ र ‘प्रस्ताव’ - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २९, २०७३ समय: २:५७:१२
काठामाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पछिल्ला केही समयदेखिको संवादहीनता शुक्रबार तोडिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ललितपुर हात्तीवनमा रहेको श्रेष्ठकै निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच आसन्न निर्वाचन, संविधान संशोधनदेखि दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध सुधारसम्मका विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
गत असार तेस्रो साता ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाएयता माओवादी केन्द्रप्रति एमाले अध्यक्ष ओली निकै आक्रामक बन्दै आएका छन् । ओलीका आक्रमणको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि उसैगरी फर्काउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा बढेको तिक्तताका कारण मुलुकको राजनीति नै ‘डेडलक’को अवस्थामा छ ।
श्रेष्ठनिवासमा साढे दुई घन्टा छलफल गरे पनि दुवै पक्ष कुनै सहमतिमा भने पुगेनन् । छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । ‘संविधान कार्यान्वयनको जटिलताका विषयमा दुई नेताले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे कुनै निष्कर्ष निस्किएन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आफू निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसको वातावरण बनाउन संविधान संशोधनमा सघाउन आग्रह गरेका थिए । एमाले अध्यक्षले भने संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको भन्दै पहिले निर्वाचन मिति घोषणाको कुरामा अडान राखिरहेको स्रोतले बतायो ।
ओली : निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा मात्र आइरहेको छ । तर, घोषणा गर्नुहुन्न । सरकारले किन मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहेको हो ? पहिले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुहोस् । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढ्छ । संविधान संशोधनमा नै तपाईंहरूको चिन्ता हो भने पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुहोस् अनि संशोधनमा छलफल अगाडि बढाउनुहोस् । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छौँ भनेर मात्र हुँदैन । हामीलाई विश्वास छैन । अहिले पनि फागुन पहिलो साता भन्नुभयो । कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रधानमन्त्री : निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्ने पक्षमा म छु । तपाईंहरूले निर्वाचनका सवालमा देखाइरहनुभएको चिन्ताप्रति म पनि सहमत छु । फागुनको पहिलो सातासम्म पनि मिति घोषणा गरिएन भने अप्ठ्यारा र जटिलताहरू आउँछन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउन तपाईंहरू पनि सघाउनुस् । मधेसीलाई पनि सहमतिमा ल्याई निर्वाचनको वातावरण बनाऔँ । त्यसका लागि संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकमा तपाईंहरूले पनि सघाउनुप¥यो । निर्वाचनका लागि वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।